Design Printing Services, GIS Map
မိမိကုမ္ပဏီအတွက် ကိုယ်ပိုင် DATA BASE တည်ဆောက်လိုပါသလား?
* Fiber Services လုပ်ငန်း
* Telecom လုပ်ငန်း
* ဘဏ် လုပ်ငန်း
* Internet Services လုပ်ငန်း
စသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် DPS မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
+ Fiber Services လုပ်ငန်းများအတွက် HH/ MH and cabinet များ၏ တည်နေရာကို မြေပုံပေါ်တွင် Lat/Long ဖြင့်သိရှိလိုပါသလား?
+ လျှပ်စစ်လိုင်းများ၏ တည်နေရာကို Lat/Long များနှင့် Database တည်ဆောက်ထားလိုပါသလား?
+Telecom လုပ်ငန်းများ၏ Tower Location များတည်ဆောက်ရာတွင် Lat/Long Location များလွယ်လင့်တကူရှာလိုပါလား?
+ Bank လုပ်ငန်းများ၏ Lone Payment များအတွက် မြို့နယ်အလိုက် Database တည်ဆောက်လိုပါသလား?
+ ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Outlet ဆိုင်များ တိုး၍ ကောက်ယူလိုပါသလား?
+ Internet Services လုပ်ငန်းများအတွက် လမ်းတစ်လမ်းခြင်းစီ၏ လူဦးရေကို သိရှိလိုပါသလား?
+ လမ်းတစ်လမ်းခြင်းစီ၏ အဆောက်အဦးအမြင့် နှင့် အဆောက်အဦးအရေအတွက်ကို သိရှိလိုပါသလား?
Yangon GIS Map Soft Copy ( Existing Data ) ကိုအသုံးပြုပြီး အထက်ပါ Services များကို ဆောက်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ လုပ်ငန်းများအတွက် ၃၆၀ ဒီဂရီ ဓါတ်ပုံ Services များပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
6. မြေပြင်အနိမ့်အမြင့်နှင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်သဖြင့် လူနေအဆောက်အဦး များနှင့် အခြားအရေးကြီးသော အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ခြင်းတို့အတွက် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပေးနိုင်ပါသည်။
Yangon Flood Map
MyanmarGuidemap 10 USD
TouristMapsmap7USD Select Different Maps
Myanmar - Many destinations included Yangon Bagan
YangonMapWallSheet 10 USD
YangonStreetDirectory 29 USD
*Access Code :
Please enter gismap as Access Code